Airlinesgbọ elu ụgbọ elu Hawaii dara na Lone Star State | Akụkọ ụgbọ elu
Home » Akụkọ ụgbọ elu » Iigbọ elu ụgbọ elu Hawaii na-ada na Lone Star State
Iigbọ elu ụgbọ elu Hawaii na-ada na Lone Star State
Iigbọ elu ụgbọ elu Hawaii na-ebupụta ọrụ ugboro abụọ kwa izu na-akwụsị n'etiti Austin, Texas na Honolulu, Hawaii
Mbata ụgbọ elu Hawaiian na Austin na-egosi ntụkwasị obi siri ike na ahịa Austin
Hawaiian ga-abawanye ọrụ AUS-HNL gaa ụgbọ elu atọ kwa izu site na Mee 28 ruo August 13
Amara uzo abuo maka nri di egwu ha, egwu na ihe omuma
Airlinesgbọ elu ụgbọ elu taa mere ememme nraranye nke ọrụ ya na-akwụsịghị izu abụọ n’etiti Austin-Bergstrom International Airport (AUS) na Honolulu nke Daniel K. Inouye International Airport (HNL). Onye na-ebu ụgbọ mmiri nke obodo Hawaii kpọbatara otu egwu na ụlọ na-egwu egwu, The Hawaiian Airlines Serenaders, na "Live Music Capital of the World" ka ọ nabatara ndị ọbịa n'ụgbọ elu mbụ ya na Hawaii.
Peter Ingram, onye isi oche na onye isi oche nke ụgbọ mmiri ahụ kwuru, "Anyị nwere obi ụtọ ịbụ onye mbụ na-eweta ụgbọ elu na-enweghị nkwụsị n'etiti Central Texas na Hawai'i." Hawaiian ụgbọ, onye mere emume mbido mmalite n'akụkụ ndị nnọchi anya si ọdụ ụgbọ elu AUS, Obodo Austin, Gaa na Austin na inlọ Ahịa Austin nke Austin. "Ma ebe a maara maka nri ha na-enweghị atụ, egwu na nka ma anyị enweghị ike inwekwu obi ụtọ ijikọ obodo abụọ a dị ịtụnanya na ọrụ anyị na-emeri."
Flight HA81 na-ahapụ Austin na Tọzdee na Sọnde na 10: 10am na 1: 30 pm ga-abata na Honolulu, na-enye ndị ọbịa ohere ịbanye n'ụlọ ha ma malite ịgagharị Oahu ma ọ bụ jikọọ na nke ọ bụla n'ime ebe anọ dị na Hawaiian. Gbọ elu si Honolulu gaa Austin, HA82, na-apụ na Wednesde na Satọde na elekere iri nke ụtụtụ wee bịarute na 10:10 nke abalị.
Hawaiian ga-abawanye ọrụ AUS-HNL gaa ụgbọ elu atọ kwa izu site na Mee 28 ruo Ọgọstụ 13 iji gboo mkpa njem njem ọkọchị.
Jacqueline Yaft, onye isi ndị isi nke AUS kwuru, "Ọbịbịa ụgbọ elu nke ụgbọ elu Austin na Austin gosipụtara ntụkwasị obi siri ike na ahịa Austin ka anyị na-aga n'ihu na-agbake site na mmetụta akụ na ụba nke ọrịa a na-efe efe." "Nke a bụ nnukwu ihe ịrịba ama maka ọdụ ụgbọ elu anyị na nnukwu obodo Austin anyị."